UVladimir Putin uxela iMfazwe eNtshona - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko UPutin ubhengeza iMfazwe eNtshona
UPutin ubhengeza iMfazwe eNtshona
[ikhuselwe-iframe id = ee9eb7794d7a388e923dda5aca1db575-35584880-78363900 ″ info = // cdn3.wibbitz.com/player?id=bf72319ca1e2145198837c0ac4b430842 ″ width = 640 ″ height = 360 ″ frameborder
Umgqatswa wongameli owenyanyiswe yiMoscow ufumana uhlaselo olukhulu lweentlola zaseRussia. Iimeyile ezithengiweyo ezihlazisayo umgijimi ophambili baphoswa kwi-Intanethi yimida yaseKremlin. Ingxabano yezopolitiko ilandela njengoko uVladimir Putin elungiselela ukuvuna umvuzo wakhe.
Yinto eyenzekileyo eFrance kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Kwaye ukuba konke oku kuvakala kuqhelekile kubantu baseMelika kufanelekile, kuba le yeyona ncwadi yokudlalwayo efihlakeleyo eqeshwe ziintlola zaseKremlin ngokuchasene noHillary Clinton kunyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, ngeli xesha umphumo wawuhluke kakhulu-kwaye ungaphantsi kakhulu ukwakha eMoscow.
UMarine Le Pen, umgqatswa othandwa ngokuphandle nguPutin, waphulukana no-Emmanuel Macron, i-centrist yolutsha eyaba sisiphathamandla esimhlophe somntu wonke e-France owayefuna ukumisa u-Le Pen kunye ne-National Front yakhe yasekunene. Ngapha koko, unyulo lwayizolo belukhona ukuqhushumba kuphelele .
Kumjikelo wesibini wangeCawa wevoti kamongameli, iMacron yafumana iipesenti ezingama-66 xa kuthelekiswa neepesenti ezingama-34 kuphela kwiLe Pen, phantse isithuba esinye nesinye. Kwili-102 laseFrance amasebe (phantse ukubala ngokwemigaqo yaseMelika), iLe Pen yathatha ezimbini kuphela. Nangona iMacron yayikhokela ukuvota kade, bambalwa ababelindele olu hlobo lwelahleko enkulu kwi-National Front, ethe yanda kule minyaka idlulileyo ngenxa yesibheno sayo esinjengeTrump-populist: anti-immigrant, anti-European Union, kunye ne-unabashedly pro-France kunye ulawulo lwayo.
Abantu baseYurophu abaxhasa i-EU kunye nabaseAtlantic kuyo yonke indawo bayavuya kukoyisa okukhulu kwe-Macron-enye yexhala abanokuthi isilele ukuvela, ngakumbi xa ii-imeyile zakhe zavela kwi-Intanethi ngolwesiHlanu, ngentshukumo ebalwe ukuhlazisa umgqatswa ophambili kwiyure yeshumi elinanye.
Okwenzekileyo kucacile ngokwaneleyo. Kwangoko Uhlalutyo lubonisa ukuba ii-imeyile zikaMacron zabiwa liqela lokuqhekeza laseRussia elibizwa ngokuba yi-APT 28 okanye iFancy Bear-yona kanye le-gang-cyber eyabamba ii-imeyile zedemokhrasi kwi-2016. Ngokwenyani, eli qela lolwaphulo-mthetho laziwayo liyinxalenye yobukrelekrele bemikhosi yaseRussia okanye i-GRU.
Le yayiyinto efihlakeleyo. Njengoko benditshilo kutsha nje, uPutin akasakhathali ukuba abantu baseNtshona bayayazi indlela iKremlin izama ngayo ukufaka oorhulumente abaxhasa iRussia kumazwe ethu-oko kubizwa ngokufanelekileyo njengokubhukuqa. IMoscow ibinokuzigquma ngcono iindlela zayo, isebenzisa abagcini abacocekileyo abangakhange babonwe ziipikethi zaseNtshona; bakhethe ukungakwenzi. Ewe, babengamanyala — abanye babagculeli baseMacron bashiya ngasemva iileta zooCyrillic, mhlawumbi behlekisa ngabo.
Kanye njengokungaziphathi kakuhle yayikukusebenza kweMoscow kwimida eyaziwayo yeenkonzo zayo zobuntlola ukusasaza ii-imeyile ezibiweyo zikaMacron. Apha i-WikiLeaks yadlala indima ekhokelayo, kanye njengoko yenzayo kunyaka ophelileyo wobukrelekrele baseRussia kunye nephulo lokubhukuqa ngokuchasene ne-United States. Amatshantliziyo aseMelika anelungelo lasekunene elinamaqhina abonakalayo eKremlin adlale indima ebalulekileyo ukutyhala eli bali , kananjalo.
Ukuphendula kweFrance kwimidlalo ye-spy-Russian, nangona kunjalo, yayihluke ngokuphawulekayo kwindlela amaMelika asabela ngayo kuhlaselo lwaseKremlin kuHillary Clinton kunyaka ophelileyo. EParis, ikhomishini yonyulo yesizwe walumkisa amajelo eendaba ukungapapashi ii-imeyile, ezazifunyenwe ngendlela yolwaphulo-mthetho. Abavoti abaninzi bawubona lo msebenzi njengokuhlaselwa kweFrance kunye neenzame zabantu bamanye amazwe zokuguqula inkululeko yabo-uvavanyo oluchanekileyo ngokupheleleyo.
Umahluko ne-United States awunakuba yinto ebambekayo. Apha, iintatheli zawa phantsi ngokwazo ukuze zifike kwibali le-WikiLeaks, zichaze iziphumo zolwaphulo-mthetho zeGRU ngaphandle kokuthandabuza. Nditsho nokusekwa kweentatheli eMelika ziye zalichaza eli tyala ngokungekho mthethweni. Ngokwenyani, ngubani onokubasola xa imbuyekezo yokutyhala umda weKremlin, ngabom okanye hayi, zibandakanya ubutyebi, udumo kunye amabhaso aphezulu eshalofini ?
Enyanisweni, inzame kaMoscow ecacileyo yokuguqula ukhetho lwaseFransi eLe Pen kubonakala ngathi yamlimaza. Wayesele enengxaki yokunxibelelana, eyinyani okanye ecingelwayo, kuDonald Trump-umntu owoyikiswayo kwiYurophu iphela. Indawo yokulahla inkunkuma ngomzuzu wokugqibela yiarhente zaseKremlin mhlawumbi zanceda iMacron ekugqibeleni. Kwi-Intanethi, abemi baseFrance wathulula i-vitriol ehlekisayo kwiqela le-Le Pen kunye namaqhina alo ahamba ze no-Putin, kunye nabaphembeleli baseMelika basekunene ababedlala ngokuphandle kunyulo lwelizwe labo. Imodeli yokuhlola eyasebenza kakuhle eMelika kunyaka ophelileyo yasilela ngokupheleleyo eFrance. Umongameli waseRussia uVladimir Putin.UPavel Golovkin / AFP / imifanekiso ka-Getty
Kuyaphawula ukuba ukungafani phakathi kweLe Pen kunye neTrump kukhulu njengako konke ukufana. I-French-rightist yipolitiki enomdla kunye nexesha elidlulileyo kunye nomyalelo wemiba-kungekhona umdlalo wokudlala kwi-populism ngaphandle kokuqonda kwimiba yomgaqo-nkqubo. Ngapha koko, amakhonkco eLe Pen ukuya ePutin agqithile, ayisiyiyo into yokuqikelela. Kunyaka ophelileyo, yena neNational Front yakhe ubuze ngokuphandle EMoscow ngemali mboleko eyi- $ 30 yezigidi ukuxhasa unyulo oluzayo, ngelixa iLe Pen's Ukunconywa esidlangalaleni Umongameli wase-Russia uphume njengayo nantoni na ethethwa nguTrump malunga noPutin.
Masicace gca malunga nokwenzekileyo apha. I-Russia isebenzise i-arsenal yayo epheleleyo yento endiyibize ngayo Imfazwe ekhethekileyo -I-espionage eqhagamsheleneyo, ubuxoki kunye nokuchasa-ngokuchasene nelinye ilizwe laseNtshona kumzamo ongekho mthethweni wokukhetha inkokeli ngakumbi eMoscow. Ukuba lo msebenzi awuphumelelanga eFrance, kwiinyanga nje ezimbalwa emva kokusebenza eUnited States, oko kuthetha ukuba iKremlin kufuneka iphinde ivavanye ukusebenza kwemodeli yayo efihlakeleyo. Ukusukela oko ubuqili baseCrimea ekuqaleni kuka-2014 ngamaGRU Amadoda amancinci aluhlaza , esebenze phantse ngokungenasiphako, amazwe akumda weRussia alungiselele ubundlobongela obufanayo baseKremlin. Obu buqhetseba abuyi kusebenza njengoko kubhengezwe kabini.
Nangona kunjalo, i-NATO kunye ne-EU kufuneka balindele ukuba iRussia izakuqhubeka nokuzama ukukhetha oorhulumente be-pro-Moscow kumazwe ethu, besebenzisa iinkonzo zayo zobuntlola ukuphazamisa inkululeko yethu. IJamani, enonyulo kwiinyanga ezimbalwa, iya kuba yinto ekujoliswe kuyo kwi-Kremlin elandelayo. Ukunikezelwa kolawulo lweBerlin kwi-EU kwimigaqo yezopolitiko nezoqoqosho-ndingasathethi ke ngentiyo kaPutin kuKhansela u-Angela Merkel-oku kuthembisa ukuba ngumlo wasebukhosini ofihlakeleyo.
UPutin uxele imfazwe eNtshona. Hayi imfazwe yekinetic, kodwa imfazwe yezopolitiko. Iinjongo zayo ziyafana kwiinjongo zemfazwe yokwenene. Ebuthathaka kwezomkhosi nakwezoqoqosho ukuba umngeni kwi-NATO ebaleni lomlo ngalo naliphi na ithemba lokuphumelela, i-Kremlin ikhethe ubuchule obuninzi. Ukanti injongo yeRussia-ukufaka oorhulumente be-pro-Putin kwiidolophu ezinkulu zaseNtshona-ayifani nokuba iMoscow iyalele i-1stUmkhosi woLondolozo lweeTanki ukumatsha usinga ngasentshona.
Lixesha elidlulileyo lokuba abantu baseNtshona bazimisele malunga nokubuyela umva kolu hlaselo. UPutin ujonge ukubhukuqa idemokhrasi yethu, kwaye akufuneki simvumele ukuba enze njalo. Ukwamkela okwenzekayo sisiqalo. Ngoku iintloko ze FBI kwaye INC babize esidlangalaleni i-WikiLeaks njengomdlali weqonga ophambili kunye nobukrelekrele baseRussia, amazwe e-NATO kufuneka aphendule ngokufanelekileyo. Ukusebenza kweKremlin eNtshona kufuneka kusongelwe, ngaphaya kweWikiLeaks kuphela, ukuba silindele ukubuyela umva ngokuchasene nobundlongondlongo bezopolitiko eMoscow.
Ngaphezulu kweminyaka emithathu eyadlulayo ndaye ndalumkisa abantu baseNtshona ukuba sikuyo Umlo obandayo 2.0 neRussia, nokuba sifuna ukuba okanye hayi. Elo khwelo lingahoywanga, kwaye ngenxa yoko ubundlongondlongo baseKremlin ngokuchasene neNtshona buye bonyuka kuphela. Ngoku uPutin uzama ze ukuguqula idemokhrasi yethu. Ukuza kuthi ga ngoku irekhodi lakhe liyi-50-50, kwaye nawuphi na umakhi uya kugcina ukugembula kwezi ngxaki. UPutin unokuphumelela le mfazwe ukuba iNtshona iyamvumela-lolukhetho oluphambi kwethu ngoku.
UJohn Schindler yingcali yezokhuseleko kunye nowayesakuba ngumhlalutyi weArhente yoKhuseleko kuZwelonke kunye negosa lobukrelekrele. Ingcali kwezobuntlola kunye nobunqolobi, ukwaligosa lomkhosi wamanzi kunye nenjingalwazi yeWar College. Upapashe iincwadi ezine kwaye uku-Twitter ku @ 20committee.
I-JPMorgan Chase itsalela iiNtengiso ze-NBC ngaphezulu kuka-Megyn Kelly ka-Alex Jones Udliwanondlebe
UMeghan Markle Ngoku ungumbhali weeNcwadi zaBantwana oThengisa kakhulu
Inqaku lokuCwangciswa Re: 'Ibali laseHorry laseMelika: Umboniso weFreak' 4 × 10: 'Iinkedama'
ikude nekhaya kwi-disney plus
umdlalo weetrone ukuthandwa lilizwe
iisayithi ezilungileyo zokubheja kwezemidlalo
yeyiphi iarhente yokumodareyitha ekendall jenner nayo
amafemu aphezulu kwi-nyc
igama kunye nenombolo yokujonga inombolo yefowuni